China China orinasa ny biodegradable tanteraka PLA mitsangana fonosana kraft taratasy harona amin'ny varavarankely sy ny zipper orinasa sy ny mpanamboatra | Oemy
Kitapo sakafo biby fiompy
Kitapo famonosana vary
Voankazo maina & kitapo voanjo
Kitapo Sakafo ara-pahasalamana & Baking
Pouch mijoro misy varavarankely sy zipper
Pouch mijoro tsy misy varavarankely
Pouch mijoro tsy misy zipper
Kitapo misy tombo-kase valo misy zipo
Kitapo misy tombo-kase valo tsy misy zipper
Kitapo misy tombo-kase telo tsy misy zipper
Kitapo misy tombo-kase telo miaraka amin'ny zipper
Kitapo misy tombo-kase aoriana tsy misy gusset
Kitapo asiana lamosina misy gusset
Kitapo gusset misy sisiny efatra
Kitapo gusset misy tombo-kase amin'ny lafiny iray
Biodegradable fonosana Bag
Kafe sy dite kitapo
Voankazo maina & bazana kitapo
Fahasalamana & Baking sakafo kitapo
Fonosana azo simbaina azo simbaina VMPBAT
Shina mpamatsy ny lamosina eco kitapo compostable pa ...
Shina mpamatsy ny efamira ambany fonosana amin'ny compo ...
China orinasa ny biodegradable tanteraka PLA mitsangana p ...
Shina mpamatsy ny lafiny iray-tombo-kase fonosana ho an'ny dite le ...
Lafiny valo voaisy tombo-kase efamira ambany fonosana kitapo ho an'ny e...
Heat Seal Tea Bag Sivana taratasy anaty horonana
OEMY Custom 8 lafiny voaisy tombo-kase efamira ambany compostable ...
Taratasy dragona maitso madio afaka mijoro paosy sy tra...
Brown Paper Square kitapo fonosana ambany miaraka amin'ny AL foi ...
Sakafo maina ho an'ny tontolo iainana pac...
OEM efamira ambany volontany kraft taratasy kafe vovoka pa ...
Fitaovana biodegradable vaovao efamira ambany fonosana b ...
Kitapo famonosana azo simba amin'ny famoronana ho an'ny vary
Mpanamboatra matihanina amin'ny voanjo biodegradable tanteraka ...
Shina orinasa ny voankazo maina fonosana indray harona voaisy tombo-kase
Shina mpanamboatra ny miloko fanontam-pirinty kraft taratasy ...
China orinasa PLA biodegradable tanteraka mitsangana fonosana kraft taratasy harona misy varavarankely sy zipper
Alefaso mailaka ho antsika Alefaso amin'ny PDF
PLA biodegradable tanteraka mitsangana fonosana kraft taratasy harona misy varavarankely sy zipper , dite ravina fonosana, kafe tsaramaso fonosana, na vokatra hafa fonosana fonosana.
Tsy kitapo famonosana tsotra fotsiny ho an'ny vokatrao izany. Ity no mpitatitra ny marika an'ny orinasanao, dokam-barotra amin'ny finday, fifandraisana misy vidiny. Ny tena zava-dehibe dia ny fiarovana ny tontolo iainana.
1. Ny kitapo fonosana vita amin'ny taratasy PLA + PBAT + Kraft, izay fitaovana azo ampiasaina.
2. Rehefa mamita ny anjara asany ara-barotra ny kitapo fonosana, dia mety ho simba amin'ny tany izy ireo ao anatin'ny herintaona ary lasan'ny zavamaniry. Tena avy amin'ny natiora ary miverina amin'ny natiora.
3. Tsy misy loto intsony ny tontolo iainana. Hihatsara sy ho tsara kokoa izao tontolo izao.
Ny angon-drakitra an-tsipirihan'ny harona fonosana biodegradable
Size & hateviny: Custom miankina amin'ny fepetra
Ink karazana: Eco-friendly Food Grade Soy Ink
Fitaovana: PLA+PBAT+ Kraft taratasy
endri-javatra: 1) .Safety Grade Sakafo ara-nofo & tanteraka Pirinty natao
2) .Great mba tsy leakage, tena tsara hamandoana-Famantarana
3) .Strong famehezana Ambany & Tsara Display Effect
taratasy fanamarinana: FSSC22000, SGS FDA etc .. fanamarinana Azo atao raha ilaina
Safidy fomba: Ambany fisaka, Mitsangàna, lafiny gusset, Zipper Top, miaraka na tsia amin'ny Window, Euro Hole, etc.
Famehezana & Fitanana Tombokase hafanana
Fikarakarana Surface Embossing
fanontam-pirinty: Copperplate fanontam-pirinty, fanontam-pirinty offset
loko: Up ny 10 loko na No fanontam-pirinty
Sary endrika: AI, PDF, CDR, PSD, sns,
Vidiny: Mifototra amin'ny fitaovana fitaovana, refy, habe, loko fanontana ary ny fepetra takian'ny mpanjifa (vidiny navoaka ho an'ny fanondroana ihany)
Fandoavana: T/T, Paypal, Western Union, Trade Assurance manaiky
30% vidin'ny kitapo + 100% cylinders fanontam-pirinty ho toy ny petra-bola, 70% mandanjalanja alohan'ny fandefasana
Santionany: 1). Free & Nice tahiry nanatitra santionany fotsiny manangona entana
2). Custom levitra 7-15 andro fiasana (Alefaso ny Express)
3). Refund Part / Full santionany saran'ny rehefa avy nandray petra-bola
Fe-potoana: 15-20 andro fiasana aorian'ny famolavolana voamarina.
Port ny Loading: Huangpu / Shenzhen /, na ny fitakiana isan-
fonosana: Fanondranana baoritra / boaty mahazatra (≤25Kg), araka ny fonosana namboarina
Ny sarin'ny kitapo famonosana biodegradable
Ny endri-javatra manokana ny harona fonosana biodegradable
1. Ny zipper mafy, vita amin'ny PLA, izay azo sokafana sy mihidy imbetsaka,
Miantoka ny hamafin'ny kitapo. Mety ho simba amin'ny tany
2. Fanontam-pirinty mazava tsara, fanontam-pirinty miloko mazava
3. Fampisehoana tantera-drano tsara
Ny kitapo dia tantera-drano sy hamandoana, ary mora ny miatrika ny hafanana ambany sy ny vanim-potoana mando.
4. Taratasy Kraft avo lenta, sarimihetsika PLA + PBAT biodegradable, sy s environmentally friendly and great value
5. Mijoro mafy ambany ，miaraka amin'ny fahafaha-mitondra lehibe
6. Mafy tensile. Ny kitapo fonosana miaraka amin'ny fanoherana ny ranomaso tsara ary maharitra
7. Varavarankely mangarahara fotsy misy ronono, porofo lehibe izany fa fitaovana azo simba tanteraka.
8. Ny endriky ny varavarankely dia azo namboarina manokana, tsy misy lakaoly, vovoka-porofo
Ny sarin 'biodegradable miditra tsimoramora ny fonosana kitapo
1. Ao amin'ny tsena, 99.9% ny valva rivotra dia vita amin'ny plastika PE, ary mila 1000 taona ny hanimba tanteraka. Tena manimba ny tontolo iainana izany. Na izany aza, ny valva rivotra PLA dia vita amin'ny fitaovam-pambolena ary mety ho simba ao anaty tany ao anatin'ny 2-3 taona. Lasa rano sy gazy karbonika raisin'ny zavamaniry.
2. Sarotra ara-teknika ny manao valva rivotra avy amin'ny PLA. Ity teknolojia ity dia eo am-pelatanan'ny mpanamboatra vitsy dia vitsy, ny orinasa OEMY dia iray amin'izy ireo.
Ny haben'ny habe fonosana amin'ny sisiny
Food Pet Package
(W * H * Ambany cm)
Afaka ny ho namboarina Raha ny Requirements
Ny Date ny latabatra ihany ho an 'ny Reference
Ny fampiharana ny kitapo fonosana
1. Ny kitapo famonosana biodegradable dia kitapo mahasalama ny tontolo iainana izay tena azo ampiasaina. Ampiasaina indrindra amin'ny fonosana: coffee bean,coffee powder ,Tea leaves, Rice, dried fruit, snack food, dried meat, whole grains, tea ,etc.
2. Fotoana izao hanovana ny kitapo famonosana plastika ho kitapo famonosana biodegradable. Kely kokoa ny fandotoana ny tontolo iainana, maintso kokoa ny tontolo iainana.
Ny dingana amin'ny varotra sy ny famokarana.
Ny orinasa 1.OEMY dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanolorana vahaolana fonosana bio-degradable ho an'ny vokatra samihafa.
2. Ny mpanjifa no laharam-pahamehanay. Izahay dia manokan-tena hihaona amin'ny mpanjifa. Mitaky sy mametraka loharano maro amin'ny R&D. Ny tanjonay dia ny hanome vokatra sy serivisy mety ho an'ny mpanjifanay.
3. Manana ny milina tsara indrindra sy ny teknolojia avo indrindra ao anatin'ny indostria izahay mba hamokarana vokatra amin'ny antsipiriany sy avo lenta. Miantoka izahay fa ho tanteraka ara-potoana ny zavatra takinao rehetra.
4.Ny fahombiazanay dia miankina amin'ny fanohanan'ny mpanjifa. Mampanahy anay ny fahombiazanao! Ampifandraiso aminay ny fahombiazanao, manomboka eto ny entanao tena tsara.
Mahazoa vahaolana fonosana namboarina avy amin'ny kaomandinao izao.
Q1: .Are mpanamboatra ianao?
A: Eny, mpanamboatra 15 taona izahay mampiditra R&D, fanamboarana, fanamboarana ary varotra. Ny orinasa Dongguan Tanànan'ny Faritanin'i Guangdong.China
Q2: Inona no fanazavana tokony hamela fantatrao momba raha te-hahazo mazava tsara teny nindramina?
A: Karazana kitapo, fitaovana, habe, hateviny, lanjan'ny vokatra ilaina
Q3: Inona no Misy santionany anjara-raharaha & no averina?
A: Santionany tahiry maimaim-poana, fa mila mandoa ny entana ianao.
Raha mila anay hanao santionany amin'ny endrikao ianao dia mila mandoa ny vidin'ny santionany. Ary raha mametraka ny baiko amin'ny ho avy sy ny habetsaky ny isa, dia afaka mamerina ny santionany vidiny ho anao.
Q4: misy ve ato aminareo maso ny vokatra?
A: Ny kalitao sy ny kitapo biodegradable 100% dia ny kolontsaintsika, mametraka ny lanjany lehibe amin'ny fanaraha-maso ny kalitao hatrany am-piandohan'ny famokarana, mampiasa fitaovana biodegradable 100% hanaovana kitapo fonosana, toy ny PLA
Q 5: Ve ny rivotra miditra tsimoramora sy zipper ny kitapo 100% biodegradable?
A: Eny. Ary ny 100% biodegradable rivotra valva sy zipper dia novolavolain'ny teknisianina.
Q 6: Azonao hivarotantsika ny loha-kitapo miaraka amin'ny famantarana ny mpanjifa hafa?
A: Tsia mihitsy. Orinasa efa niorina izahay. Fantatsika fa manana copyright amin'ny marikany ny olona iray. Manaja ny zo sy ny tsiambaratelon'ny mpanjifanay izahay ary tsy hampahafantatra amin'ny hafa.
Q 7: Inona no fe-potoana fanaterana?
A: Ny fe-potoana fanaterana dia amin'ny ankapobeny ao anatin'ny 15-25 andro, fa ny tena fe-potoana fanaterana dia miankina amin'ny fepetra
Previous: Shina orinasa ny lamosina famehezana kitapo gusset biodegradable fonosana ho an'ny dite ravina
Manaraka: China fonosana mpamatsy ny biodegradable PLA mitsangana fonosana kraft kitapo taratasy
kitapo PLA biodegradable
kitapo PLA compostable
kitapo PLA azo komposta
fonosana PLA compostable
kitapo fonosana PLA compostable
kitapo PLA compostable an-trano
fonosana PLA compostable an-trano
kitapo fonosana PLA compostable an-trano
Kitapo fonosana PLA azo amboarina ao an-trano
kitapo PLA azo simba ao an-trano
Kitapo fonosana efamira misy sisiny valo voaisy tombo-kase ...
Biodegradable fanontam-pirinty Health sakafo sy Baking f ...
China fonosana mpamatsy ny biodegradable PLA s ...
fanao vary fonosana pouches amin'ny loko pirinty
Kitapo taratasy vita amin'ny kraft vita amin'ny biodegradable
Hahazo ny fanavaozam-baovao farany sy ny tolotra ...
Karazana 3 karazana komposta azo simba tanteraka...
Ny tombony amin'ny taratasy kraft amin'ny sakafo pac...
Kitapo azo simba—Loto fotsy T...
Toetran'ny akora azo simbaina
Nahomby ny OEMY namolavola VMPBAT
R1014, F10, A6, Yongning Street, Zengcheng, Tanànan'i Guangzhou, Faritanin'i Guangdong, Sina.
Contact Us Ankehitriny
Non-foto-Food fonosana Bags, voankazo maina paosy , Pet Sakafo fonosana Bags , Fahasalamana Food fonosana Bags, voankazo maina Pouches , voankazo maina fonosana paosy ,